ိdriving ranks in forestry ! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing »ိdriving ranks in forestry !
ိdriving ranks in forestry !
Posted by မောင် ပေ on Jul 2, 2011 in Creative Writing | 1 comment
စာလုံးပေါင်း မှားနေရင် ခွင့်လွှတ်ကြဦး ဗျို့ ။ eros ရဲ့ ဒီအချိန်မှာ ဘာလုပ်ချင်သလဲ ဆိုတဲ့ ပို့ စ် နဲ့ အဲဒီအောက်က ပါလေရာ ရဲ့ ကွန်မင့် ကို ဖတ်ပြီး သိသလောက်လေး ကို ပြန်ရှဲ ချင်လို့ ပါ ။
သစ်လုပ်ငန်းမှာ driver လုပ်မယ် ဆိုရင် Grade 1 to5ရှိတယ် ဗျား ။
Grade 1 : စပယ်ယာ ၊ သစ်တိုက်တဲ့ကား တို့ ဝန်ထမ်းကြိုပို့ ကား တို့ မှာ ယာဉ်နောက်လိုက် ( ဒီနေရာ ရဖို့ မလွယ်သလို ၊ ဒီနေရာ ကို ရပြီး ရင်လည်း မ out ကြပါဘူး ။)
Grade2: စပယ်ယာ မှ ရာထူး တက်သွားသောသူ ၊ ခေါက်တိုဆွဲ လေးများ ၊ ရုံး လူကြီး များ ၏ ဟိုနားဒီနား သွားမောင်းပို့(လခ မပြောတော့ဘူးနော် )
Grade 3: မန်နေဂျာ ကား ကို မောင်းခွင့် ရသွားပြီ ဗျာ ။ များသောအားဖြင့် Grade 1, Grade2မှ တက်လာသူ များသာ ဦးစားပေးသည် ။ ( လခ မပြောဘူး)
Grade 4: သစ်တင်ကားတွေ မောင်းခွင့်ရှိသွားပြီ ။ ထုံးစံအတိုင်း Grade 1,2,3 က တက်လာသူတွေ ကို ဦးစားပေးတယ် ( လခ မပြောတော့ဘူး ၊ လခ က အဓိက မှ မဟုတ်တာ )
Grade5: ဆရာကြီး ဖြစ်ပြီပေါ့နော် ၊ သစ်လုံးငန်း driving မှာတော့ ။ သစ်လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ ဆီဘောက်ဆာ တို့ ကလပ် ( သစ်လုံးများကို ညှပ်ကြီးဖြင့် ညှပ်ကာ တင်မည့် ကားပေါ်သို့ တင်ပို့ ပေးသော carrier တစ်မျိုး ) ။ ဒီအဆင့်မှာတော့ ဆရာကြီး လို့ ဆိုတဲ့ အတိုင်း ပေါ့ ၊ ဆီဘောက်ဆာ သမား လခ ကို တော့ အတိအကျ မသိလို့ မပြောဘူးဗျာ ။ သို့ ပေသည့် ကလပ်မောင်းနှင်သူ အကြောင်းပြောမယ် ။ လေလံ ဆွဲ ရတဲ့ သစ်ရုံးတွေ မှာ လေလံ ပြီး ပြီ ဆိုရင် သစ်လုပ်ငန်း က သူ နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တော့ပါဘူး ။ လေလံအောင်သွားသူ က သာ ကိုယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ lot ကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် တင် ။ အဲဒီမှာ ရိုးရိုး သစ်တင်ကားတွေ နဲ့ လာသယ်ဖို့ လွယ်ပေမယ့် ၊ အဲဒီ သစ်တင်ကား ပေါ်ကို သစ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ ကလပ် ကို တော့ လုပ်ငန်းခွင် ရှိရာသို့ သယ်ယူလာရန် မလွယ် ၊ မည်သူ မျှ လည်း ကလပ် ကို ယူမလာပါ ။ ထိုအခါ သစ်လုပ်ငန်း ရှိ ကလပ် ကို ငှားရမ်း အသုံးပြု ကြ ရတော့တယ် ။ ကလပ် ဆိုတာလည်း လူတိုင်း တက်မောင်းနှင်ခွင့် မရှိ ။ သစ်လုပ်ငန်း ပိုင် ကလပ် ကို မောင်းနှင်မည် ဆိုလျှင် သစ်လုပ်ငန်း မှ ခွင့်ပြု ထားသော ယာဉ်မောင်းသည်သာ ခွင့်ရှိသည် ။ တိုတိုပြောရလျှင် လေလံအပြီး သစ်တင်ယာဉ်များပေါ်သို့ ကလပ်မောင်းသူ က သစ်လုံးများ ကို ညှပ်တင်ပေးရသည် ။ သူ ၏ တစ်နေ့ တာ ၀င်ငွေ မှာ နှစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ် အနည်းဆုံး ။ အဲဒါ ဟိုဟာဒီဟာ မပါသေးဘူးနော် ။ လေလံအောင်သူ က ကလပ်မောင်းသူ ကို ပေးရမယ့် တစ်ရက်တာ မောင်းနှင်ခ ။
ဒီလောက် ဆိုလျှင် သစ်လုပ်ငန်း ယာဉ်မောင်း ၊ စပယ်ယာ များ ရဲ့ ဘ၀ ကို နည်းနည်းလေး ခန့် မှန်းလို့ ရပြီ ဟု ထင်ပါသည် ။ ကျွန်တော့် ပို့ စ်တွင် ကြားညှပ်သုံးထားသော အင်းဂလိ စာလုံးလေး များ ကို ဘိရုမာ ပြန်ဆိုခွင့်ပြု ပါဦး ။ သိရှိပြီးသား ဆိုလျှင်လည်း သည်းခံ တော်မူကြပါ ကုန် ။
driver = ယာဉ်မောင်း
Grade = အဆင့်အတန်း
out = ထွက်ခွါသည်
driving = ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်း ( ဥပမာ ကားမောင်းသည် )
carrier = သယ်ယူပို့ ဆောင်ပေးသူ
အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ဆိုတာ ဒါပါပဲ။
သစ်လုပ်ငန်း ပြောတော့ ကွန်တိန်နာ ကား မောင်းတဲ့ လူတွေ တနေ့ ၂သောင်း ကွန်တိန်နာ အခွံ တနေ့ကို ၅ခေါက်လောက် တိုက်နိုင်တယ်.. ပစ္စည်း ပါတဲ့ ကွန်တိန်နာ ဆိုရင် ၃သိန်း အပြတ်.. ကားငှားခ.. ဟိုင်းဝေး ထွက်မယ်ဆိုရင် ၁၀သိန်း.. ပိုင်ရှင်နဲ့ ကားဆရာ.. ၂၀/၈၀ နှုန်းနဲ့ ခွဲယူကြပါတယ်။